RONALDO vs MESSI: Loolanka labada Laacib oo dib u bilaaabanaya – Gool FM
(Champions League) 18 Sab 2018. Waxaa caawa oo Talaado ah la daah furi doonaa kulamada ugu horeeya heerka group-yada ee tartanka Champions League xili ciyaareedka 2018/2019.
Waxaa markale sida caadiga ahaa la daawan doonaa loolanka rikoodhada qaaska ah tartanka Champions League ee xidiga kooxda Barcelona Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo xili ciyaareedkan ku dagaalami doono maaliyada kooxda Juventus.
Champions League ayaa ah tartanka uu ugu jecelyahiin ciyaartoyda kubada cagta, Cristiano Ronaldo ayaana ah gooldhaliyaha ugu sareeya taariikhda tartankan kadib markii uu kasoo dhaliyay 120 gool.
Ronaldo ayaa sidoo kale ah xidiga hal xili ciyaareed goolasha ugu badan ka dhaliyay tartanka Champions League wuxuuna ka dhaliyay 17 gool, sidoo kale wuxuu noqday xidiga ugu badan ee inta uu gaaray finalka tartankan hadana ku guuleestay wuxuuna sidaas sameeyay 5 jeer, 4 jeer ee ah Real Madrid iyo 1 jeer ee ah Manchester United.
Sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa ah xidiga kaliya ee 3 final kala duwan ee tartanka Champions League goolal ka dhaliyay iyo sidoo kale ciyaaryahanka kaliya ee shabaqa soo taabtay 6-dii kulan ee wareega group-yada.
Hadaba Lionel Messi ayaa ah xidig ku soo xiga Ronlado dhanka gooldhalinta taariikhda tartamada qaarada yurub waxayna kala dhaliyeen 123 iyo 103 gool
Labada ciyaaryahan ayaa ka mideysan mid 7 jeer ee goolasha saddexleyda ah tartanka Champions League, halka sidoo kale Messi uu yahay ciyaryahanka goolasha ugu badan ku dhaliyay wareega 16-ka wuxuuna dhaliyay 20 gool.